Hevitra MPANOHARIANA | Jiona 2009 |
Ny ako sy ny hevitra momba ny fankalazana ny 26 jona 2009 -fizarana voalohany-
2009-06-28 @ 22:31 in Ankapobeny
Efa nandalo sahady ny andro fahatsiarovana ny nitsingerenan'ny namerenana tamin'i Madagasikara ny fahaleovantenany. Tsorina fa tsy dia nisy loatra ny fiantraikan'izany tamiko, na dia sambany aza, taorian'ny 10 taona mahery be niasako ao amin'ny orinasa iasako ankehitriny no mba tsy niasanay io andro fety io. Ny hany tombony dia mba afaka nanaraka tsara ny zavamisy araka izay tratran'ny heriko aho, nefa dia lasa tsy nisakafo atoandro tao an-trano indray saingy misy dia misy ny antony.
Ny andro fiomanana
Mieritreritra ny hanao fety makotroka ny mpanongam-panjakana mifehy ny firenena amin'izao fotoana izao, sady talentany mihitsy io taranja iray io, ka nanapatapaka lalana vitsivitsy azo heverina fa afovoan-tanàna nanomboka ny tolakandron'ny zoma 25 jona 2009. Tratran'izany fahatapahana izany ohatra ny arabe midadasika manoloana ny fiaro Ampefiloha sy ny arabe etsy Soarano hihazo ny Gara iny. Mazava loatra fa lasa any ambadika (andrefana) ny Carlton ny lalana rehefa hihazo an'i Mahamasina sy avy any Mahamasina ary lasa lalana ifanenana ny arabe manoloana ny biraon'ny Boriborintany voalohany Ambodifilao Soarano. Raha tsentsina tanteraka noho ny tranga tahaka izao io lalan'ny fiara manoloana ny Boriborintany voalohany io ny alarobia 24 jona 2009 tolakandro noho ny fifamezivezen'ny fiara sy fahafenoan'ny mpivarotra amoron-dalana dia zara raha nisy fiara teo ny ampitso. Fay daholo angamba ny mpitondra fiara rehetra ka naleo najanona an-trano io fitaovam-pitaterana io. Nahagaga mihitsy fa lasa toy ny tolakandron'ny andro tsy fiasana ny afovoan-tanàna tetsy Analakely, Tsaralalàna ary Soarano tamin'io fotoana io. Tsy misy fiara mifamezivezy firy fa ny mpandeha an-tongotra no hany manjaka ary mahazo mandeha afovoan'arabe tsy misy ahiahy aza. Mba mihena izany setroka mpandoto tontolo iainana.
Ny lalana fotsiny anefa no nobahanana, fa araka ny fijeriko manokana dia tsy nahazo olona betsaka akory ilay fampisehoana atao eo anoloan'ny gara. Zara raha nahafeno ny fitobian'ny fiara manatrika ny tsangambaton'ny fahalalahan-gazety ireo manatrika dia izay. Efa fambara ho an'ny mpikarakara izay tranga izay. Azo heverina ihany anefa fa tsy te-hifangaroharo amina olona mampiahiahy izay mety ho liana hijery. Iza moa no tsy mahalala fa na dia tamin'ireny tolona nataon-dry zalahy tamin'ny voalohan'ny taona teo amin'ny kianjan'ny 13 mey ireny aza dia tsy menatra mihitsy ireo mpangaro-paosy manao ny asany tanaty olona? Toa ry zalahy indray manko no nameno ny lohalaharana sy tao anaty vahoaka somary mba mifanety ao. Tsy maintsy mihatakataka somary manao tazan-davitra noho izany izay mbola te-hijery fampisehoana maimai-poana.
Nilatsaka ihany ny aizina, efa tsindrian-daona sahady ireo izay te-hijery afomanga hihazo an'Anosy toerana mahazatra ho amin'izany karazana fampisehoana izany. Betsaka ihany koa anefa mieritreritra ny hivezivezy handeha amin-toeran-kafa fa matahotra ihany fandrao misy baomba mipoaka any anaty vahoaka any. Misy anefa ny fanao hita fa mivandravandra ny fahapotehany rehefa mandeha mivezivezy teny afovoan-tanàna ianao amin'ity alina mialoha ny fetim-pirenena ity. Tsy nahita ankizy nampilaharina amin'ny arendrina taratasy intsony aho. Nahatsikaritra ihany koa ny maro fa ifampitadiavana mihitsy ny arendrina taratasy tamin'ity indray mitoraka ity. Izaho manokana dia tsy nahatsipalotra mpivarotra azy io mihitsy fa dia ny olom-pantatra ihany no mifanoro amin'izay ahitana ny mpivarotra azy. Ireny piapiaka shinoa tsy dia tiako ireny no betsaka nefa tsy dia mbola maharesy lahatra ahy aloha izy ireny. Ny arendrina manko mila ilay afo mihitsy fa tsy hoe hazavana fotsiny ihany. Ahoana moa izany?
Fa inona ny lanjan'ny arendrina?
Tamin'ny andro fahagasy dia nandritra ny voalohan'ny taona (andro fandroana ihany koa no nilazana azy) no nitondrana ny arendrina manerana ny tanàna na nivezivezena. Ny afo amin'ny arendrina tamin'izany fotoana izany no endriky ny fandroahana ny fanahy ratsy mialoha ny idirana ny taombaovao indray. Fotoan-dehibe indrindra teto anivontany ny fandroana satria mankany an-tanindrazany hihaona amin'ny havana mpiray fiaviana avokoa ireo mila ravinahitra rehetra. Nisy ny fotoana manara-bolana ny andro ankalazana ny andro fandroana io, tamin'ny fotoana nanjakan'i Ranavalona fahatelo kosa dia naraikitra ho 22 novambra fitsingerenan'ny andro nahaterahany io andro fandroana io. Rehefa zanatany frantsay isika dia nafindra ho 14 jolay, fetim-pirenena frantsay, io andro fandroana io. Mazava loatra fa lasa fanao ny fitondrana arendrina rehefa tonga ny fetim-pirenena frantsay, ary nandritra ny fanjahanantany no nihafoana tsikelikely ny lazan'ny fandroana, ka lasa zavatra mifandraika amin'ny fivavahan-drazana sisa no ankalazana ny Alahamadibe na ny Taombaovao malagasy izay tsy ifanarahan'ny mpandala azy intsony ankehitriny ny andro ankalazana azy.
Tamin'ny fiandohan'ny niverenan'ny fahaleovantena malagasy dia mbola ilay arendrina fahagasy izay nentina tamin'ny alalan'ny hazo izay misy bozaka na vorodamba lemana jabora arehitra eny amin'ny lohany no nampiasaina fa noho ny loto navelany ny ampitso dia nosoloin'ny arendrina taratasy (antsoina hoe fanala) tsikelikely ny toerany. Tsy dia niteraka olana loatra ho an'ny fiaraha-monina ny nivadihan'io arendrina io ho fanala, satria hitan'ny rehetra fa tsy misy ny loto aterany nefa mahafinaritra ihany koa ny mijery azy ireny maro dia maro sy amin'ny loko isan-karazany.
Ataoko fa maro dia maro amintsika no mbola mankafy ireny fanala ireny. Ao anaty taratasy nokalian'ny mpanao asa-tanana no mandrakotra ny labozia misy afo mirehitra, entina mody an-trano dieny mbola misy afo fa ny olona misaona no tsy mitondra afo mody. Noho izay endrika sy hevitra izay no tsy itiavako loatra ny piapiaka shinoa satria hazavana fotsiny no entin'iny fa tsy taratra mihitsy ilay afo fandroahana fanahy ratsy, marina fa angovo no mamelona ny jiron'ireny piapiaka shinoa ireny fa ilay afo hita maso no ilaina. Mazava loatra fa matahotra ny tsy hahalafo ny mpanao asa-tanana matoa tsy niraika loatra tamin'ny fanamboarana fanala na arendrina taratasy. Tamin'izahay mbola kely ihany koa dia nahafinaritra anay ny nanao jiro kapoaka, izahay ihany no nanamboatra azy ka nisy aza ny fotoana ny ankizilahy no mitondra jiro kapoaka toy ireny mitondra môtô an'eritreritra ireny fa ny ankizivavy kosa no mitondra arendrina.
Fa inona no nandrava ny tarazon'ny fitondrana arendrina?
Tsy dia mandehandeha fotsiny amin'izao io faharavan'ny tarazo iray manavaka ny fetin'ny fahaleovantena io eto Antananarivo. Voalohany amin'izany aloha ny faharavana ateraky ny fiainana an-tanan-dehibe. Afaka miara-monina tsy mifandray ny mpifanolo-bodi-rindrina ka ny fifanenana an-dalana ihany sisa no ifankafantarana hoe itsy mipetraka eto akaikinay. Tsy misy intsony noho izany ny fihavanana mafy sy akaiky hany ka tsy hita loatra ny fiaraha-manatontosa zavatra iray tahaka ny miara-mandahatra ny ankizy iray tanàna. Fahabangana iray ihany koa ny tsy fisiana mpitarika na olona manantalenta amin'ny fitarihana (leadership), na olona manetry tena mamolavola fandaharam-potoana ho an'ny fokontany ohatra. Tsy nisy ihany koa na tsy naheno aho na tsy nahita fiomanana ho amin'ny fankalazana ity fetim-pirenena ity isam-pokontany. Tena samy maka ho azy ny olona... tafiditra tsara ao amin'ny fiainana an-tanandehibe samy maka ho azy ny mpiara-monina.
Faharoa manaraka izany ny fahasamihafan-kevitra miteraka fiatakatahana. Na ahoana na ahoana, monina aty amin'ny faritra ahitana ny foko rehetra manerana an'i Madagasikara ny tena dia soritra ihany ny fisarahambazana eo amin'ny mpiara-monina. Lasa manampy ny fahasamihafana foko na fiaviana sy fivavahana ny tsy fitoviam-pijery eo amin'ny sehatra politika. Tsy vitan'ny hoe zary miara-monina sisa izany ny iray fokontany fa misy fifampiandaniana miafina ihany koa ary sakana lehibe ho amin'ny fiaraha-manao zavatra izany toe-javatra izany. Mampibaribary ny mahalatsaka an-katerena ny fiaraha-monina mihitsy ity fety indray mitoraka ity ka tsy tokony odiana fanina velively.
Fahatelo manaraka izany indray ny fanjakan'ny toe-tsaina kamo sy tsy vonona hikaroka fa ny handray na hividy vonona fotsiny. Ao anatin'ny fiainana an-tanandehibe ihany dia ny fifanakalozambarotra no tena manjaka. Noho ny fieritreretana mandrakariva ao anaty ao fa "sarotra ny fiainana" nefa tsy te-hisahirana dia izay hita fa mora ihany no vidiana. Tsy mahagaga raha amin'ny amin'ny piapiaka shinoa kokoa no ironan'ny maro. Tsikaritro ihany anefa fa tsy ny ankizy rehetra no mitondra arendrina na piapiaka fa toa solontena ihany no mitondra azy. Tsy resaka solontena velively anefa no anaovana azy ity fa ny rehetra mihitsy no tokony hitondra. Rehefa miteny hoe ny rehetra aho dia ny lehibe ihany koa tafiditra ao anatin'izany. Noho ny tsy fahalalana ny heviny intsony angamba dia lasa ny ankizy sisa no ampitondrana arendrina na fanala. Fantaro fa misy dia misy ihany koa ny mahafinaritra ny maso tadiavina amin'itony fitondrana arendrina itony ka izay no ikarohana izay hahamaro ny mitondra azy fa tsy ny hahavitsy azy velively. Io fahakamoana io ihany koa no nandrava tsikelikely ny tarazon'ny fitondran'ny olondehibe indrindra indrindra ny arendrina. Toe-tsaina manimba ve ny fieritreretana hoe efa lehibe aho ka tsy tokony hitondra arendrina intsony, na hibaikobaiko sisa? Indrisy!
Ary ny hitako farany fa nandrava ny tarazon'ny fitondrana arendrina ihany koa dia ny fahamehana hijery afomanga rehefa amin'ny alina. Tsy ilay miara-mirona mitondra arendrina mandray anjara amin'ny fanomezana fahafinaretana intsony no mahamaika ny olona fa ny hijery fahafinaretana ataon'ny mpitondra na mpitantana. Mampidi-doza eo amin'ny tarazo izay fomba fironan'ny saina izay, ary azo itarafana ihany koa fa tsy te-handray fanapahan-kevitra na handray andrakitra ny olona fa ny hafa no andrasany, nefa be fialonana mandrava efa rehefa misondrotra ny hafa avy eo. Mihevitra aho fa ny mahatonga izany fironana izany ny fandefasana mialoha loatra ny afomanga. Lasa tsy miraika loatra ny hanao arendrina ny olona rehefa manakaiky loatra ny fotoana fandefasana afomanga fa ny hijery no mahadondona. Sosokevitro noho izany ny tokony hanemorana araka izay azo atao ny fandefasana ity afomanga ity. Maninona moa raha amin'ny sivy ora alina any mihitsy vao alefa? izany hoe mba efa tapi-mihinana ny olona amin'izany fotoana izany, mba misy ihany koa ny fotoana andehandehanana itondrana ny arendrina. Aoka kosa tsy ho fialana bala ny filazana fa ny fandrosoana no tsy tokony hanaovana arendrina intsony.
Mandritra ny alina fiomanana
Hiverina amin'ny fitantarana indray aho taorian'izay fanazavana lavalava izay. Tsy toy ny teo aloha ny mpijery afomanga tetsy Anosy tamin'ity indray mitoraka ity. Tena vitsy tsy araka ny nanampoizana azy ihany koa ny mpijery afomanga. Nalalaka ry zareo ny arabe manodidina a! azon'ny fiara nifamezivezena mihitsy raha navela handeha ny fiara. Gaga mbamin'ny avy any amin'ny toeran-kafa manararaotra hijery ny afomangan'ny renivohitra. Ry zareo aza dia loa-bava niteny hoe vitsy olona. Ny Afomanga ve moa tsy hahafinaritra mandrakariva? Fa vantany vao tapitra hoy ry zareo (izahay aloha tsy niaraka tamin'izy ireo fa tsy niraharaha izay afomanga izahay tato an-trano... na ny nijery tany amin'ny terrasse aza tsy natao) ilay afomanga dia toy ny olona mahana izany avokoa izy rehetra nanao dia maika nody. Nanjary nampatahotra tampoka ny nody, tahotra inona? karazan'olona mampatahotra ve? Sa lasa mampanahy ny fodiana fa tsy hisy ny hiara-dalana mandrapahatonga any amin'ny fonenana?
Raha tsy nahafahana nihetsika mihitsy ny arabe hodiana rehefa nisy ny afomanga tany aloha tany dia gaga izahay fa vetivety ry zareo dia efa tonga taty an-tano sahady nefa dia an-tongotra no nataon-dry zareo. Mety ho lesoka lehibe tamin'ity indray mitoraka ity, ankoatra ny tsipoapoaka hafakely ny tsy nahafahan'ny fiara nivezivezy loatra nandritra ny atoandro, tsy noho ny fitohanana fa noho ny fanapahan-kevitry ny mpitantana ny tanàna tia manao...barazy nefa tsy mahazaka akory ny barazy ataon'ny hafa. Mazava loatra fa tsy hisy hitondra fiara lavitra azy tsy misy miambina amin'ny alina ireo zatra nijery afomanga nipetraka eny ambony fiara fahiny. Eo ihany koa ny fifampiahiahiana. Fa ny tena mahonena dia ny teo Analakely. Tsy mahalala ny zavatra tsara sy nokolokoloina intsony ny olona mpankeny, tsy mahagaga raha maty hitsaka ny bozaka mba nisy endriny ihany. Ny fofona manodidina ny Lapan'ny tanàna mbola eo ampanamboarana moa dia mampahatsiahy ilay CUA antsoina hoe Commune Urinoire d'Antananarivo fa tsy Commune Urbaine d'Antananarivo. Tena tsy ampy isa mihitsy moa ny trano fidiovana? Eo ambadiky ny Lapan'ny tanàna io indrindra manko dia misy efitrano laalava fidiovana fa ilay mandoa vola mihitsy angamba aloha no tsy tian'ireto mpirevy amin'ny alina ireto. Izany anie, na aiza na aiza no misy ireto mpirevy ireto dia manjono an-tanety avokoa ny lehilahy e! (mivalandrano no tiako lazaina anareo sao tsy azonareo: mbola an-dalana hody aho nandritra ny afomanga ary izany no nahitako ny fanaon'ireo mpirevy ireo. Sarotra aloha ny tsy hiteny fa ireo HEVERINA ho sarangan'ny madinika no tena maro an'isa amin'ny olona mpivezivezy ary manahy aza aho fa tahaka ny anaovany ny any aminy tsy misy toeram-pidiovana manokana no anaovany ny tanàna rehetra 'sady efa mihevitra ny tenany ho tompon'ny tanàna ihany koa ry zareo. Raha ny resaka ankalamanjana aloha dia ry zareo tanteraka no tompon'ny fety.
Efa lava loatra tsy araka izay niheverako azy sahady ny lahatsoratra ka aleo asiana fizarany fa andro manaraka ny andron'ny Zoma! na izany aza dia efa vonona ny fandefasako vaovao tapatapany ao amin'ny twitter. Ary efa misy andian-tsary rahateo navoakako ao amin'ny tahirintsary jona09.
jentilisa 29 jona 2009, amin'ny 00:30
Sao diso fandraisana ny atao hoe tsy mananga-tsaina?
2009-06-24 @ 11:30 in Ankapobeny
Mahoraka dia mahoraka ankehitriny ny fanentanana hananga-tsaina, na sehatra fiainana andavanandro na eto an-tserasera. Amin'ny sehatra andavanandro dia hita tokoa fa mihamaro ny mananga-tsaina nefa misy dia misy ny midrikina toa anay tsy mety hananga-tsaina, ary ampiako hoe arantiranty an-trano. Tsy hoe tsy miraharaha ny fiandrianam-pirenena mihitsy izahay raha tsy mananga-tsaina ary tsy mampaninona anay na dia rabirabiana aza izahay hoe tsy misy saina. Tsoriko fa misy dia misy ny antony tsy hananganay saina ary raha jerena ny dokambarotra an-gazety dia mibaribary amiko ny tian'ity fitondrana ity asongadina fa raha eo ihany ilay teny hoe fahaleovantena dia ny fetin'ny foloalindahy no tena asongadiny.
Voalohany aloha, efa mahazatra ny hevitra hoe "tsy manaiky ny fijoroan'ity fanjakana ity izahay" no tsy hananganana saina sy ny hoe "miverina ho zanatany indray" ka inona no antony hananganana saina (amin'ny trano). Fa misy dia misy ihany koa ny fahitako fa tsy manaiky ny maha-anay anay ihany koa ity fitondrana ity. Raha miteny aho hoe izahay dia ny lehilahy tsy foloalindahy izany. Jereo ny dokambarotra: rehefa tsy foloalindahy sy ry zareo dia tsy lehilahy! Sarin-jaza amam-behivavy ihany no tena asongadina (hita hatraty amin'ny serasera fa ny vehivavy no tena tsy manaiky izany tsy mananga-tsaina izany ary fantatry ry zareo izany, misy anabavy iray izay aza moa tena masiaka dia masiaka tamiko mihitsy nefa aho tsy nanery azy velively na hanisy teny sompirana hanaisotra ny saina efa natsangany (an-trano).
Raha atsangana amin'ny trano ihany koa ny saina, dia rehareha sy fijoroana amin'ny mahamalagasy izany. Marina dia marina tokoa izany! mirehareha amin'ny sainy ihany koa ny Palestiniana saingy tsy midika velively izany fa mahaleotena ara-politika i Palestina. Afaka mirehareha ihany koa isika fa manana sainam-pirenena. Ny sainam-pirenena no fanehoana hita maso ny fiandrianam-pirenena (symbole) fa inona kosa no tena manamarika izany fiandrianam-pirenena izany? Koa aza tsiny indrindra raha tsy mananga-tsaina aho fa tsy hitako izany fiandrianam-pirenena izany rehefa dinihina fa ny tombotsoa frantsay no tena nandray anjara mavitrika tamin'ny fanonganam-panjakana, ary mba manana ny tombotsoany amin'izany ihany koa ny Amerikana. Ny manahirana manko, ny Lalampanorenana na ny Dinampirenena no mametraka fa ny lokon'ny saina dia fotsy mena maitso, koa nahoana no faly ianao manangana io saina io nefa ny Lalampanorenana mamaritra ny lokon'io saina ahantonao? Manao zavatra tsy ampiheverana fa entin'ny fahazarana fotsiny anie izany ianao e! Mariho mazava tsara fa azo ovaina ny lokon'io saina io raha izany no tondroin'ny Lalampanorenana.
Aoka ihany koa holazaina fa tsy mety mihitsy ity filazana hoe maitso fotsy mena ity ny fanonona ny lokon'ny sainam-pirenena malagasy. Tsy saina Italiana akory izy io fa ny loko manaraka ny taho no tononina aloha (iny tsinona no ankavia amin'ny sary ary rehefa mamaky soratra isika dia avy any ankavia no miankavanana, dia toy izany ihany koa no tokony hamakiana ny sary), izany no tokony hanononana ny loko voalohany ho fotsy; dia avy eo ambony ihany koa no tononina vao midina ambany tahaka ny mamaky lahatsoratra ihany ka izay no anononana ny mena alohan'ny maitso. Noho ny fahazarana tsy manisy fisainana no mahatonga ny teniteny foana hoe maitso fotsy mena. Eo ihany koa ny mety ho fahazaran'ny teo aloha manonona ny manga fotsy mena fony mbola nozanahina mivantana i Madagasikara. Dia zatra ho azy ny hoe maitso fotsy mena avy eo nefa tsy mifanaraka amin'ny fomba famaky ny saina mihitsy io mahazatra ny maro io. Tokony hisy lanjany ihany koa izay lazaiko io. Dia lasa fahazarana tsy ahalalana izay tena antony ihany koa ilay mananga-tsaina an-trano.
Etsy ankilan'izany, tsy maintsy lazaina fa tsy hoe mijanona hatreo ny resaka. Mitondra ny sainam-pirenena kosa izahay eny amin'ny fihetsiketsehana izay ataonay. Mitondra ny anjara birikinay izahay amin'ny fanehoanay ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. An-tanana no anangananay ny sainam-pirenena satria mbola mila averina izany fiandrianam-pirenena izany. Hevitro manokana, matoa mananga-tsaina amin'ny tranony ny olona dia mirehareha amin'ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao izy! sanatria mananganagam-poana tsy amin'ny antony ny mariky ny fiandrianam-pirenena (ny saina) nefa ny fototra mamaritra izany fiandrianam-pirenena izany nahantona amin'izao fotoana izao. Raha entina an-tanana kosa ny sainam-pirenena dia mbola mandeha mikaroka na mamerina izany fiandrianam-pirenena izany izay mitondra na mankasitraka izany fitondrana ny sainam-pirenena an-tanana izany.
Hita tsara fa naato avokoa ny andrim-panjakana voasoratry ny ny Lalampanorenana rehetra, eo aloha ny Prezidansa, dia eo ihany koa ny antenimiera roa tonta, dia efa norenesintsika ihany koa fa nosoloina ny mpikambana ao amin'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana... asa mifanaraka amin'ny inona ao amin'ny Lalampanorenana ihany koa no nanaovana izany fanovana izany. Voahosihosy tanteraka ny Lalapanorenana mandrafitra ny fiandrianam-pirenen'i Madagasikara. Tsy misy fanajana ilay Lalampanorenana intsony ka moa tsy karazana fanesoesoana ny fananganana ny saina fotsy mena maitso nefa ny lalàna fototra mametraka izany lokontsaina izany tsy hajaina? Izay no ilazako indray hoe entinay an-tanana indray ny saina rehefa manao fihetsiketsehana izahay entinay hamerenana ny fiandrianam-pirenena no anton'izany. Tolona ny anay ary izay ny fomba fijerinay.
Mamarana izany dia indreo koa misy sary vitsivitsy maneho ny fandravana natao tamin'ity taona ity ka maharesy lahatra anay fa haverina ny fiandrianam-pirenena amin'ny fitondranay ny sainam-pirenena an-tanana fa tsy ajoro an-trano izay fanekena ny esoeso ataon-dry zalahy tsy manaja ny Lalapanorenana akory. Sary eo Behoririka io naseho io ary toerana iray no niverimberenana nalaina sary.
Nandrovi-tsihy ny miaramila saingy tsy rava ny tolona
2009-06-22 @ 05:01 in Politika
Mbola tany am-pividianana ny carte SD ho amin'ny fakantsary vao novidiana aho ka tsy nahatratra sary ny fandrovitan-tsihy nataon'ny miaramila tamin'ny Sabotsy 21 jona lasa teo. Misy ihany anefa ny sary nampiseho fa nandalo teo amin'ny Magro Auditorium Ankorondrano ry zareo tamin'io andro io ary mbola teo ampiantsoana ny lehibeny tany ambadika tany ny mpitarika azy ireto nijery ny tombatomban'ny mpitolona tao angaha!
Misy foana ny mihevitra fa vitsy ny mpitolona ao rehefa mijery hatrety ivelany, nefa tsy ao an'eritreriny velively ny hadadasiky ny toerana misy ireto mpitolona ireto. Efa misy tsindrimandry ihany ny maro fa hisy zavatra mitranga amin'ity herinandro ity ary izay no nahamay ahy hividy fakantsary vaovao hanolo ny simba teo aloha.
Betsaka tamin'ny mpitolona tao Ankorondrano no tsy nahalala akory fa nisy ireo miaramila sy zandary ireo saiky handrava ny tolona tao amin'ny magro mihitsy. Noravan'izy ireo tsy nananany antra ny fiomanana hilahatra saiky hataon'ny tanora teo amin'ny rond-point Antanimena, nisy ny voatifitra ka naratra, ilay tapa-tanana moa dia nilaza fa teo amin'ny telo metatra niala taminy ilay miaramila iray no nitifitra azy tamin'ny bala fingotra ka nahatapaka ny tanany. Nisy ihany koa mazava ho azy ny baomba mandatsa-dranomaso.
Nihoam-pahefana ireto miaramila ireto ka izay nitangorongorona rehetra dia norarafany tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso avokoa. Tsy nahagaga raha nolerany ihany koa ireo olona nivorivory teo anoloan'ny biraom-pokontanin'Ankorondrano. Olona mampanao didipoitra ny zanany anefa ireo olona ireo, ka tahaka ny ahoana moa ny mahazo ireo zaza hatao hasoavana? Niala bala ry zalahy rehefa nahatsapa ny tsy nety nataony, na izay mihitsy ny tena paikany, ka io zavatra nataony io no antony saika handravany ny teo amin'ny magro. Na dia noravany aza anefa ireo tanora teny Antanimena ka maro tamin'ireo tanora ireo no tsy tody intsony teny amin'ny Magro dia aseho anareo ihany ireo sisa teny Ankorondrano saingy tsy sahin'ny miaramila tampoka ny nandrava azy. Marihina fa andro faharoa saiky handravana ny tolona io andron'ny sabotsy io fa ny zoma ry zareo no efa saiky handrava, saingy noho ny fifamoivoizana nihitsoka dia tsy sahy ry zareo sao mihitsoka ihany koa ny fiara mitondra azy ireo. Maro tamin'ny vatan-dehilahy tao amin'ny magro rahateo no efa vonona dia vonona raha nanao tsy tsy mety teo ireo miaramila ireo.
Ny manahirana dia misy ny fanapahan-dalana eo anoloan'ny gara noho ny fety nefa toa tsy nahasarika olona araka ny nanampoizana azy loatra ilay fety nandritra ny roa andro aloha izay. Asa hanao ahoana tokoa ny tohin'ireo rehetra ireo amin'ity herinandro ity.
jentilisa, 22 jona 2009
Nahoana aho no terena hisafidy amin'i Babylona sy i Egypta?
2009-06-12 @ 23:31 in Politika
Fa inona ity resaka fivavahana tampoka ity? Tsy voatery ho fivavahana fotsiny fa misy resaka tanindrazana ihany koa ao anatiny. Na Egypta na Babylona dia samy anarana firenena, ary firenena lehibe sy nanana ny lazany tamin'ny androny. Mbola tsy firenena Isiraely no efa nanana ny lazany i Egypta. Nitondra ho babo ny mpanjaka, ny lehibe amin'ny firenena ary ny manam-pahaizana tao amin'Isiraely kosa i Babylona rehefa resiny ny firenen'Isiraely.
Olona iray no namidy ho andevo tany Egypta kanjo lasa praiminisitra iny olona iray namidy ho andevo iny taona maromaro taoriana; ka nampanantsoiny ny fiankavian-drainy (Jakoba na Isiraely) iray manontolo hitoetra akaikiny kokoa ary nomena faritra malalaka iray antsoina hoe Goshena. Ny voalohany namidy ho andevo tamin'io fianakaviana io ihany no tonga tany tsy tamin'ny sitrapony fa ny 70 ambiny kosa nonina tany noho ny nahim-pony sy ny fandosirana kere tany amin'ny faritra nihaviany. Ela ny ela, an-jatony taona taty aoriana, niova ny mpitondra tany amin'io firenena io. Hitan'ilay mpanjaka fa nitombo ireo mponina tao Goshena ka feno azy nanerana ny firenena, natahotra ny herin'ireo mponina tao ingahy Farao na ilay mpanjaka egyptiana. Manahy izy, na izay no paika entiny hamotehina ireo olona ireo, fa raha miray amin'ny tafika vahiny ireo dia ho resy tosika ny fanjakany. Inona no nataony? Naveriny ho amin'ny fanandevozana indray ireo olona tonga tamin'ny nahimpony tao amin'ity firenena ity. Atao hoe fanandevozana satria noterena hanao ny asa mety ho tsy ankasitrahany. Omena ny asa mafy indrindra ihany koa. Atao tsy mahatsiaro afa-tsy ny asa mba hahareraka azy dia hihena ny taranany, kanjo izay vao maika nampitombo ny zanak'Isiraely bebe kokoa. Nalefa indray ny tetika hamerana ny isan-jaza, ka raha vavy no teraka dia velomina fa raha lahy kosa dia vonoina... amin'izay levona ny anaran-dray. Nefa dia mbola nisy ihany mpampivelona nanao tsara ny asany ka namelona ny lahy hatrany. Hatraiza ny halalin'ny fankahalàna? Soa fa niasa hatrany ny fitiavana, jiro kely mitsilopilopy anatin'ny aizi-kitroka manarona ny firenena. Nandevozina an-tanin'olona ireo.
Ankehitriny, ho'aho, nanararaotra ny krizy manerantany sy teto amin'ny firenena manokana ny maro amin'ny orinasa maro ka manao izay hangejana ny mpiasa tsy hiompana afa-tsy amin'ny asa ny atao rehetra. Tena misy ny orinasa tsy afa-manoatra ka tsy maintsy manala ny mpiasa ao aminy fa misy dia misy ho'aho ireo orinasa no manala mpiasa Malagasy mba hampidirana mpiasa Frantsay eto amin'ny firenena misy ahy. Ny karama anefa tsy mitovy velively ka tsy maintsy mpiasa Malagasy maromaro no asolo vazaha iray. Misy idiran'ny krizy ve izany? Sao dia saina manga, fotsy, mena amin'izay no atsangana amin'ny fetim-pirenena fa tsy fotsy, mena, maitso ry zareo? Dia ahemotra 18 andro monja ihany koa ny fankalazana ilay fetim-pirenentsika? Angaha izay ihany! Mba hitsinjovana tsy handroahana ny maro an'isa sy tsy hanakatonana ny orinasa dia miara-mihafy ny rehetra (izany hoe ny mpiasa ankoatra ny tale isan-karazany) ka mifandimby miato amin'ny asany sady tsy miasa no tsy mandray vola araka ny andro tsy iasana. Dia mikaonty ao anatiny ihany koa ny alahady... Oadray, fa angaha lasa karama isan'andro ilay isam-bolana teo? Ary raha ao anatin'ny andro iasanao ianao no marary tampoka na misy voina na sampona hafa dia mitady olona hisolo anao ianao, ka ianareo no mifanaraka amin'ny karamany, izany hoe ianao no manome karama io olona io fa raha tsy izany dia voaroaka ianao satria nandao ny asanao. Orinasa frantsay izany! iza avy moa ireo miteny hoe aleo ihany zanatany Frantsay? Santionany ary io e! Indrisy fa andevozina eto amin'ny fireneny.
Fa inona indray no idiran'i Babylona amin'ity resaka ity? Fa inona no nampiavaka ity firenena ity? Nobaboiny ny maro tamin'ny zanak'Isiraely. Nampiasainy ho amin'ny tombotsoany. Tian'ilay fanjakana nandresy raha mba adinon'ireo babo avokoa ny mombamomba azy tany amin'ny tany nihaviany tany, nisy ny notambatambazana ka nomena hanina avy tamin'ny anjaran'ny mpanjaka. Nomena anarana Babyloniana ka iny anarana iny no ampiasaina fa tsy ilay anarana ihaviana intsony. Nokolokoloiny tamin'ny kolontsainy sy ny fombafombany hany ka tsy mahagaga loatra raha nisy ny famelana ireo olona hiverina an-tanindrazany amin'izay no betsaka ireo nisafidy ny hijanona any ihany. Efa zatra tsinona, nahazo tambitamby sady tsy dia nisy loatra ny famoretana ary tsy nisy loatra ihany koa ny fitarainana avy tamin'ny maro nandritra ny fahababoana ka inona no mahory? Dia inona no mahatonga ny sasany mbola nody ihany? Ny ao amin'ny baiboly nanao hoe mba hanangana indray ilay tempoly ao Jerosalema izay any Jodia. Toy ny manao hoe mba hanangana indray ny firenen'i Jodia (na Isiraely). Ny tempoly no maha-Isiraely an'Isiraely tamin'izany fotoana izany koa na eo aza ny mety ho fiadanana nianohona aleo ihany manangana izay manavaka ny tena sy mampamirapiratra ny tena.
Fa iza ianareo no tsy mbola nampitsiriritin'ny firenena matanjaka ny zavatra tsara any aminy ka toy ny anehoany hoe any aminy no misy ny antsoina hoe fiadanana? Iza ianareo no hahasahy tsy hanome anarana tandrefana mihitsy ny zanakareo? Fa iza ianareo no mbola handany fotoana hilazalaza sy hanazatra ny zanakareo izay manavaka ny fahendrena malagasy ankoatra ny fanovozany ny fahalalana tandrefana sy ny fahalalam-pomba tandrefana indrindra indrindra any an-tsekoly na foiben-kolontsaina? Iza ianareo no tsy mahatsiaro ho kevoka raha mba mizaka ny zom-pirenena matanjaka iray? Dia nahoana no mbola mahatsiaro fa Malagasy ihany? Fa raha mahatsiaro fa Malagasy ihany dia tokony hifanampy amin'ilay fananganana ny rava rehetra, tahaka izany ny fiandrianam-pirenena, tafiditra ihany koa ny kolontsaina manara-penitra eo amin'ny lafiny fampandrosoana, izany hoe fanajana ny maha-olona sy ny tontolo iainana. Izaho ry zareo amin'ireo tranga roa ireo dia mahatsiaro ny tenako ho any Egypta kokoa ka aza tsiniana raha herinandro aty aoriana indray vao manoratra. Mandany fotoana manokana mihitsy.
Fa manantena inona amin'ny Amerikana isika?
Indraindray misy lafiny mahatsikaiky ihany ny tolona hamerenana ny ara-dalàna eto Madagasikara. Toa tadiavina ahindrahindra koa ny Amerikana enti-manohitra ny ataon'ny Frantsay mova tsy niverina tamin'ny androny 1947 indray? Fa ny tolona 29 marsa tokoa naompan'ny sasany tamin'ny fiandrandrana ny mety hihavian'ny tafika amerikana, izay tsy mahalala na inona na inona amin'izany, kanjo hay ny miaramila frantsay sasany ihany no manao fanamiana amerikana ka nony injay faly mahita iny ny olona dia aripany na baboiny tampoka. Izaho koa dia tsy sasatra ny mamerimberina fa tsy nankasitrahan'ny Amerikana loatra ny fifanarahan'ny Malagasy sy ny Koreana tamin'ny resaka fambolena katsaka satria simba ny varotra katsaka amerikana amin'izany. Rehefa Malagasy dia Malagasy fa tsy mitsiriritra ho Egypta na Babylona (Babylona Frantsay na Babylona Amerikana).
Fa naninona indray no niala tao amin'ny Magro?
Efa mba nisy ihany ny karazana fifanarahana fa tsy mila mifampitambitamby amin'izay toerana anaovana omeko tsy omeko dia taitra tampoka ny tena raha nahita tamn'ny gazety fa hankeny Ambohijatovo indray ny mpandàla ny ara-dalàna. Efa nomarihiko mazava tsara fa kely noho ny eny amin'ny magro Ankorondrano ny eny Ambohijatovo ka tsy hitako loatra izay mbola hakana ny toerana kelikely kokoa indray. Etsy ankilany indray anefa, vao nisy nanadrohadro ankolaka ihany tamin'izay niresaka tamiko fa olona vitsy no ao Ankorondrano ka ireny ho ahitany fa diso hevitra izy niteny izany. Mbola latsaky ny roatokon'ny tamin'ny sabotsy 6 jona 2009 (manakaiky ny atsasany aza) anefa ireny olona nizotra nankeny Ambohijatovo ireny. Koa aza atao mahagaga raha tsy atonona ny toeram-pivoriana teny.
Fa nisy zava-mahagaga ahy ihany iny tamin'ny alakamisy iny ka tsara ny mitantara azy. Niserana teny Ankorondrano aho tamin'ny atoandro ka nahita ny hamaroan'ny olona tao... akoban'andro anefa io ka tsy maro noho ny tamin'ny Sabotsy mazava loatra. Niserana teny amin'ny zaridainan'Analakely manoloana ny gara iny aho avy eo hitarataratra ny zavamisy eny. Efa hita tamin'ny gazety Madagascar-Laza manko fa hankeny Ambohijatovo indray ny tolona. Hitako fa feno vato miparitadritaka eny ambony bozaky ny zaridaina. Ratsy avy hatrany ny saiko fa ho entina itorahana olona ireo vato ireo satria betsabetsaka ihany koa ry zalahy tsisy atao no matoritory sy milalao eny ambony bozaka toa miandry zavatra. Amin'ny iray ora sy folo minitra atoandro izany... Nisento aho rehefa nandre fa tsy nisy na inona na inona loatra nitranga teny an-dalana. Ataoko fa nisy herimbavaka tao.
Mba fantatrareo moa? Andro fahatelo misesy amin'ny fivavahana fibebahana ny Sabotsy 13 jona 2009 io ka nampahatsiahy ny tenin'i Mosesy tamin'i Farao hoe : Alefaso ny olona hanao andro firavoravoana ho ahy any an'efitra, lalan-kateloana (telo andro) ny toerana hanaovanay izany andro firavoravoana izany... Niniana nampitoviana ve ka ny andro manaraka ilay telo andro naompana amin'ny fivavahana manontolo no hihavian'ny "fahafahana"? Ny fantatra aloha amin'izao fotoana izao dia resy lahatra tanteraka ny miaramila amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy ho avy ilay niteny fa ho avy na dia sarotra dia sarotra aza ny mino izany. Eny, tarataratro fa hiakatra ambonimbony kokoa indray ny dingana amin'ny herinandro ho avy iny.
jentilisa, sabotsy 13 jona amin'ny 01:31
Ny tolona Sabotsy 6 jona 2009 indray no nahazo olona be indrindra
2009-06-07 @ 21:42 in Ankapobeny
Na iza na iza mpitolona amin'izao fotoana izao dia samy nahatsapa avokoa fa ny tolona tao amin'ny Sabotsy 6 jona 2009 indray no nahavory olona indrindra tamin'ity tolona hamerenana ny ara-dalàna ity. Azo heverina fa montsana avokoa ny habetsahana rehetra teo aloha. Ahoana no ahafahana milaza izany? Hipoka tanteraka ny kianja malalaka manoloana ny trano may manoloana an'i Magro sy Auditorium izay be velarana ihany fa tsy mba kelikely izany. Nandany andro mihitsy aho nandrefy tamin'ny alalan'ny google earth.
Ny kianjan'Ambohijatovo nanaovana ny fivoriana ohatra dia mirefy 70 metatra ny halavany miala avy eo amin'ny tohatohatra fipetrahana mandrapahatonga eo amin'ny sehatra fikabariana na fihirana; 55 metatra ny sakany avy eny ambony manatrika indrindra ny fiantsonan'ny fiara mankany Alasora sy Ambohimanambola; saingy mahatratra ny 75 metatra kosa izany sakany izany amin'ny tandrifin'ny sehatra nolazaiko teo aloha ihany. Rehefa feno anefa io kianja io tamin'ny nahabetsaka ny mpitolona mandala ny ara-dalàna dia hatrany amin'ny 135 metatra any ho any ny halavan'ny kianja feno olona.
Raha raisina indray ny kianjan'ny 13 mey izay tsy nahafahan'ny mpandàla ny ara-dalàna nijanonana fa nandalovana ihany tamin'ny voalohany fa ny velaran'ny kianja nisy olona tamin'ny tolon'ny TGV no raisina dia 70 metatra ny halavan'ny kianja miainga avy eo amin'ny amin'ny nisy olona ary 63 metatra kosa ny sakany mandrefy miala avy eo amin'ny 18°54'18.57'' atsimo sy 47°31'22.87" atsinanana mankeny amin'ny 18°54'19.54" atsimo sy 47°31'20.93" atsinanana , fa 68 metatra izany raha raisina miaraka amin'ny ambany arcades izay misy olona tokoa. Nefa matetika dia nalalaka mandrakariva ny arabe hatreo amin'ny 18°54'19.30"atsimo 47°31'21.59" Atsinanana mandrapahatonga eny amin'ny 18°54'21.52"Atsimo, 47°31'23.73" Atsinanana izay mamakivaky io kianja io. Nesoriko ihany koa ny fiantsonan'ny fiara tena nanatrika indrindra ny lapan'ny tanàna satria izay mandalo eo dia mahalala fa voafefy io ka tsy ahafahan'ny sarambamben'ny olona mivory. Ny tena ivorian'ny olona tamin'izany fotoana izany anefa dia eo amin'ny 55m x 90m (rehefa vita ny asam-pandoroana ny rnm sy ny tvm ary ny orinasan-dRavalomanana isan-karazany) fa efa famindram-po lehibe kosa raha atao hoe 120m ny halavan'ny misy olona nefa dia azonao atao ihany koa ny mikajikajy azy avy eo.
Raha raisina kosa ny refidrefin'ny eny amin'ny kianjan'ny Magro sy Auditorium ivorian'ny mpandala ny ara-dalàna amin'izao fotoana izao ka miainga avy eo amin'ny zoron'ny fefy avaratra andrefana (18°53'05.29" atsimo, 47°31'22.17" atsinanana) mandra-pahatonga eny akaikin'ny zoron'ny fefy atsimo andrefana (18°53'09.45" atsimo, 47°31'22.51" atsinanana) dia mirefy 129 metatra, ny sakan'ny fefy avaratra dia 55 metatra satria misy fialofana izay ijoroana sy ipetrahan'olona ihany koa io fa tsy ilay 49 metatra araka ny refin-tokotany avaratra tsy akory. Ny halavirana avy eo am-bavahady mitoraka mahatratra ny fanorenan'ny Auditorium anefa dia 60 metatra. Marihiko fa ny toerana ivorian'ny olona ihany no refesiko etoana fa tsy ny faritry ny Magro sy ny Auditorium manontolo tsy akory. Raha ireo fandrefesana ireo no jerena dia azo atao tsara ny milaza fa mitovy ny haben'ny kianjan'ny Auditorium (manjary lazaina hoe kianjan'ny ara-dalàna) sy ny kianjan'ny 13 nahavorian'ny TGV ny olony nefa tamin'ny Sabotsy 6 jona teo dia efa olona mihizina tsy ahafahana mihetsika firy na dia ny ivelan'ny fefy sy ery ampitan'ny kianja misy ireo mpivaro-gazety sy mpivarotra madinidinika hafa ireo.
Noheverina hihalefy tsikelikely ity tolona ity rehefa mandeha ny andro sy ny volana saingy vao maika niroborobo tampoka teo (efa hanakaiky ny telovolana izay no lasa). Inona no mety ho anton'izany? Noho ny filazana ankolaka fa ho avy eto Madagasikara mialoha ny fetim-pirenena ve ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana? Toa te-hilaza izany tsikelikely manko ny mpitarika eto an-toerana. Tsy misy velively anefa amin'ny tenin'ny filoham-pirenena soritra ahafantarana izay mety hiaviany alohan'ny fetim-pirenena izany. manahy aho eto fa ho kobaka ambava io fanentanana milaza andro fahatongavana io. Eo ihany koa ny fanetsiketsehana isam-paritra, rehefa andro Sabotsy indray manko izao dia lasa misy ny filaharam-be miainga any amin'ny faritra any ka mirona mankany Ankorondrano. Eo ihany koa ny fanetsiketsehana ny olona manodidina an'Antananarivo renivohitra. Faritra maromaro tokoa no ivezivezen'ny mpitari-tolona ka ny andron'ny alahady 7 jona 2009 manomboka ny folakandro fotsiny dia nolazaina fa ho eny Andrady Itaosy, Andranomena ary Andoharanofotsy ry zareo. Efa nandehanana ny teny Fenoarivo Atsimondrano (izay nitorahan'olo-tsy fantatra ny mpivarotra sady mpitolona mavitrika cocktail molotov ny tranony saingy soa ihany fa nalaky voavonjy izany) sy ny teny Ambohimangakely. Raha izao fitetezam-paritra izao tokoa aloha no jerena dia ny baiko tokana sisa no andrasana dia mety ho avy any amin'ny toerana iray avokoa amin'ny fotoana iray ny mpandala ny ara-dalàna rehetra any amin'ny faritra rehetra izay tratra antso saingy mbola eto ampanombohan'ny fitetezam-paritra isika aloha amin'izao fotoana anoratana izao.
Rehefa ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika no maty hasina:
Etsy ankilan'izany dia mihapotika tsikelikely ny hajan'ny mpanao fanamiana rehetra (Miaramila, zandary ary polisy). Nisy ihany ny ezaka fampihavanana any amin'ny vondrona tsirairay any saingy tsy mahasitrana velively ny aretina izany rehefa iniana tsy jerena ny fototr'aretina. Voalohany, tsy eo amin'ny samy mpanao fanamiana no misy olana fa eo amin'ny mpanao fanamiana sy ny sivily mihitsy. Be loatra ny tsy rariny mianjady amin'ny sivily ataon'ny mpanao fanamiana isan-karazany. Eto moa isika dia ao anatin'ilay resaka hoe fandio iray siny tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka, nefa araka ny fahatsapana dia toa lalin'aty dia lalin'aty tokoa ilay tandroka ka mahalany betsaka. Inian'ny manam-pahefana isan-karazany ny milaza fa noho ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana no tena mampirongatra indray ny fandrobana sy ny fanafihana isan-karazany Aely miaraka amin'izany koa fa sandoka ireny mpanafika manao fanafihana ireny.
Ny filazalazan'ny gazety (taratra sy gazetiko) nivoaka ny sabotsy 6 jona teo anefa dia nahafahana nanamarika fa tena mpitandro ny filaminana fa misandoka ho an'ny vondrona hafa ihany ireo manao asa ratsy ireo. Efa nanambara mihitsy koa moa ny filohan'ny vaomieran'ny fiarovana ao amin'ny FAT fa izy mihitsy no maniraka zandary sy miaramila manao fisavana, miaraka amin'ny taratasy avy any amin'ny fitsarana (tsy tena aseho akory ilay taratasy) izay efa nolavin'ny minisitry ny fitsarana moa. Ny olana amin'ity fisavana ampanirahan'ingahy Ramaroson Alain ny miaramilany ity anefa dia tsy vitan'ny fisavana no ataony fa raofiny avokoa ny entana bebe sanda any amin'izay savainy. Tsy manaiky ny hipetra-potsiny izy na dia nokianin'ny sefon'ny etamazaoro aza ny fanitsahana andraikitra ataony, satria araka ny nolazainy dia be dia be tokoa ny fitaovam-piadiana mbola tsy hita nanjavonana ka atao izay ahitana azy ireny, sady be loatra koa ny vola miparitaka (ny tiany raofina angamba no marina kokoa!) entina haminganana ny FAT.
Tsy azo adinoina ihany koa anefa ny olana eo amin'ny samy mpanao fanamiana saingy ny fiaingan'ny olana no niniana disoina. Eto aloha aho dia manararaotra fa nisy tokoa ny fandrahonana hitokona nataona vondrona iray tao amin'ny polisy noho ny tsy fankasitran-dry zareo ny mpitondrany fa ny tohiny no tsy fantatra mazava. Vohikala iray sy mpamaham-bolongana iray manko no mba hitako nilaza io toe-javatra iray io hatramin'izao ka andrao lazain'ny sasany ho tsahotsaho foana izany. Hiverina amin'ny foto-dresaka amin'izay aho : ny tenin'ny Jeneraly Andrianafidisoa no nilaza fa ny raharaha 2002 no nisian'ny fivakisan'ny tafika voalohany ka tokony nilàna fampihavanana. Trangan'aretina hita maso no tamin'ny 2002 fa ny fiandohan'aretina dia tamin'ny fiokoan'ny GMP (faran'ny taona 1974) nitaky ny hisiana Jeneraly Tanindrana, ka nahatonga ny fampiakarana ny gradin'ny jeneraly hifototra amin'ny resa-poko fa tsy fahaizana intsony mba hisian'ny antsoina hoe fifandanjam-paritra rehefa nitondra ny filoha Ratsiraka. Nanomboka hatreo dia maro tamin'ny manamboninahitra ambony tokony hisalotra ny galonan'ny jerenaly no nihitsoka teo amin'ny gradin'ny kolonely, noho ny foko misy azy efa maromaro ihany no jeneraly).
Ataoko hoe tsy dia nampaninona loatra iny fa ny fanendrena ny lehibem-paritra isan-karazany mitana ny fibaikoana rehetra dia nifototra tanteraka tamin'ny resa-poko ihany koa. Tamin'iny Repoblika faharoa iny, ny ankamaroan'ny [mody ataoko hoe tsy izy rehetra] mpitana ny fibaikoana rehetra, na miaramila na zandary fa eo amin'ny polisy no tsy azoko antoka loatra, dia avy amin'ny foko Antesaka avokoa (fahotana ve ny manonona azy io mivantana?), avy eo dia miitatra ho ny foko avy ao atsimo atsinanana rehetra (Betsirebaka hoy ny fitenenana tsy dia mihaja loatra) ary fahatelo manaraka vao mety ho tafiditra hahazo ny fibaikoana ny foko Betsileo satria mifampiziva ry zareo. Mazava loatra fa misy ny vondron'olona mitam-piadiana misongadina satria vetivety dia miakatra grady rehefa mitana ny fibaikoana. Araka ny fijeriko dia mety ho hitan'ny filoha Ravalomanana io fisongadinana foko mitana ny fibaikoana mitam-piadiana avy amin'ny foko iray io ka tiany noravana, na nasiany fanitsiana. Hitanareo ihany anefa fa mahalotika fon'olona izany fanalàna fibaikoana izany, ary ny zava-doza taminy dia ry zareo mpanao fanamiana ireto ihany no mahazo alalana hitazona sy hampiasa ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara.
Ny tiako asongadina eto dia ny fametrahana ny fibaikoana rehetra teo ambany fitantanana foko iray ka ny fanalana izany eo ampelatanany dia heveriny ho karazana filazana ady aminy. Ny voamarika hafa ihany koa dia mora tanterahina eto Madagasikara hay ny fandripahana olona hafa toy izay nitranga tany Rwanda na dia mety tsy hahatratra ny faratampony akory aza ny fifankahalana eo amin'ny samy olona. Izany hoe efa mihoatra ny 30 taona mahery izay no nametrahana "baomba milevina" teto Madagasikara teo amin'ny lafiny ara-tafika toy ny "baomba milevina" amin'ny vatsi-pianarana manjary lasa zo fa tsy tombondahiny ho an'ny mahay ho an'ny mpianatry ny Anjerimanontolo aty amin'ny firenena miteny ampahany na manontolo ny teny frantsay. Amin'izao fotoana izao ary: ahoana no hitsaboana io aretina efa nitaiza nihoatra ny 30 taona tao amin'ny zandary sy ny miaramila io? Efa maro amin'ny mpitàna fiadiana manko no manararaotra ny fampiasana ny fiadiana eny ampelatanany hanaovana asa-ratsy. Fanamarihana farany: raha miresaka foko aho teto tsy noheveriko hisiana fankahalana velively no anoratako azy fa ny tsikaritro no ampitaiko dia samy mitsakotsako isika rehetra amin'izay tokony hanaovana ny foloalindahintsika Malagasy. Ahitsio aho raha diso ka azavao tsara ny hevitrao!
jentilisa, 07 jona 2009 amin'ny 23:43
Ho lavitr'ezaka ny tolona?
2009-06-05 @ 23:10 in Ankapobeny
Dify ny herinandro nanoratako farany, nitaintaina ny tapaka sy namana ary tsy latsak'izany ihany koa ny mpamaky eto amin'ity bolongana ity. Nisy ny nandefa mailaka, ary teo ihany koa ny niantso mihitsy. Lozako fa manahy noho ny amiko ny olona. Tsy lasa lavitra anefa aho fa eto Babylona ihany. Babylona sy ny asa tsy mitsahatra, tsy mahalala sabata (alahady manko e!), paska ary pentekositra fa mitovy daholo,manompo hatrany.
Gaga ny tato an-trano, fa oviana aho no tsy namonjy fiangonana amin'ny fety kristiana hatramin'ny naha-mpandray ahy ny fanasan'ny Tompo? Izaho koa gaga! Sambany! Reraka noho ny fanompoana ny vatana na dia mbola matanjaka aza ny saina! mamandrika ihany koa anie ny maheno hira sy toriteny amin'ny radio fahazavana e. Ilaozana matory maraina fotsiny dia alim-pody! Sao dia Jesosy no tonga alohan'i "dada"? hoy ny zandriko iray izay... Fa aiza tokoa i "dada" no tsy mbola tonga foana e? Tsy fantatro e! Any anatin'ilay sambo mitondra vary sy menaka avy any Arabia Saodita any angamba. Na ho tonga i "dada" na tsy ho tonga tsy manaiky ny hanjanahana an'i Madagasikara ara-toe-karena aho, tsy manaiky ny fanapotehana ny tanindrazako aho. Na hitolona samirery aza, hitolona amin'izay fantatro fa tandrify ahy.
Lavitr'ezaka rahateo ity tolona ity fa tsy fohy ezaka velively, izay angamba no tsy maha-tanora ahy intsony, efa tsy mahandry mitady gidraka ny tanora sasany satria "hendry" loatra ny tolona sy ny mpitolona. Efa misy ireo andian'olona mitady vahaolona ara-tafika fa tsy mety intsony ny ifampidinihana. Ilay fitsarana manameloka an'i "dada" tamin'ity herinandro ity ihany koa moa lasa mampihomehy ihany. Androany no atao ny fitsarana dia rahampitso io mivaly avy hatrany ary sazy amin'ny vola $ sy € ny onitra fa tsy amin'ny ariary. Fa hilatsa-bidy angaha lehiretsy ny ariary ka aleo atao amin'ny devizy avy hatrany ny lamandy? Hisy raharaha vanona intsony ve?
Noho ny fanompoana eto Babylona dia nieritreritra aho fa isaky ny sabata atoandro no mamonjy fihetsiketsehana etsy amin'ny Auditorium. Mbola hiditra amin'ny roa ora folakandro amin'io an! Nigadona teny aho tamin'ny sabata 30 mey 2009 tamin'ny 11 ora katroka. Nifanindran-dalana tamin'ireo nanao filaharambe namonjy an'Ankorondrano. Isaky ny boriborintany na isam-pokontany moa no ilaharan'ny olona. Miadana dia miadana ny famindran'izy ireo. Izaho kosa nanao dia maika nefa tsy misy olona hovonjena akory any! ny fandehan'ny raharaha mbola tsy manomboka no tena jereko, mijery ny vaovao manodidina sy ankoatra ny kabarin'ny mpitarika no atao.
Hitako ary iry tranoheva kely ialofan'ny olona nefa toa misy fametahana afisy ihany koa. Dia toy ny karazana "Hall d'information" kely tokoa izy io fa misy gazety azo vakiana ary misy mamoaka amin'ny taratasy lasa afisy ihany koa ny lahatsoratra nofantenana mikasika an'i Madagasikara sy ny tolona ataony ary ny raharaha manodidina azy mivoaka amin'ny aterineto. Hevitra mety ihany! hoy aho an'eritreritra, satria tsy mifandrindra mihitsy matetika ny tolona an-tserasera sy ny tolona ampahibemaso. Betsaka amin'ny mpitolona tsy mahita izay aty an-tserasera no tena tsy maharaka vaovao intsony noho ny tsy fisian'ny radio mada natokana ho fanentanana intsony. Ny radio fahazavana kosa tsy afaka hanao izany fanentanana izany fa ny mamoaka amin'ny ampahany somary betsaka amin'ny akon'ny tolona ihany no azony atao.
Ankoatra izany, mandeha ihany koa ny bizina kely madinika eny ho eny. Betsaka ireo mivarotra satroka lamba sy T-shirt. Ny T-shirt misy soratra DADA indray no lamaody ato am-pivoriana. Fa mandeha ihany koa ny gazety tsy dia fahitanao ivelan'ny kianja loatra intsony. Ankoatra ny "gazetin'ny gasy" dia nivoaka ihany koa ny "vaovaon'i Gasikara" (ny tamin'ny sabotsy no lazaiko io an! izay tsy voatantara loatra aty an-tserasera). Ny fijery azy dia mety ho fisarahan-kevitra tao amin'ny gazety voaloha ihany no nampivoaka ny gazety faharoa. Raha mivoaka amin'ny teny malagasy manontolo ihany ka ny gazety notononiko voalohany dia mitady hibahan-toerana kosa ny teny frantsay ao amin'ny gazety faharoa. Misy ihany koa ireo mivarotra boky kely feno tolonkalom-pitiavan-tanindrazana sy fanindrahindrana olona. Boky tsy mandalo sivana mazava ho azy ary tsy ho hita eny amin'ny fivarotam-boky nefa dia tena vita tsara tokoa.
Miresaka boky ihany isika dia hivadika taranja tanteraka. Hitanareo ihany fa mpandala ny teny malagasy ny tena etsy andaniny tia manana boky ihany koa etsy ankilany, indrindra fa ny boky tsy ho hitanao velively any amin'ny tranon-kolontsaina frantsay mampirohotra ny ray aman-dreny te-hahatafita ny zanany amin'ny fianarana toy ny "Alliance française" sy ny "Centre culturel français" (CCAC teo aloha). Nandalo teny Tsimbazaza ny tena io zoma 5 jona 2009 io ka nanararaotra nandalo tao amin'ny Akademia Malagasy hividy ilay boky rakibolana rakipahalalana vao navoakan'ity akademia malagasy ity. Efa re ihany manko fa hoe hivoaka amin'ity volana jona ity io boky mitentina 100 000Ar io. Tsy nahandry izay hivoahany eny amin'ny fivarotam-boky ny tena ka tsy tana rehefa teo am-bavahady fa hitsofoka hanontany ny vaovao hoe oviana izy io no hivoaka?
Gaga anefa aho rehefa nahita ny tranon'ny Akademia Malagasy! Hay ve nisy fanavaozana toy izao ity trano ity e! tena nahafinaritra ny nijery azy ary hita fa vao haingana tokoa ny fotoana nanavaozana azy! Tadidiko ihany ny endriny teo aloha nampahonena sy toa komavoka ery nefa toa mahamiramirana ery ny mahita azy ankehitriny. Hita hoe nisy fandalovan'i "dada" izy ity matoa niova nahafinaritra tahaka izao ny endriny. Mba firy tamin'ireo efa niserana teto no nahatsikaritra ity fanavaozana manontolo ny trano nataon'i "dada" ity? Niditra tao anatiny ny tena ka vao maika finaritra! Tadidiko ihany fa toa maizimaizina nampalahelo izay tato fahiny nefa dia tena mazava manjopiaka aoka izany ankehitriny! Tena azo ireharehana ilay toerana e! Hay ve mahavita trano tahaka izao ny Malagasy e! Noheveriko ho tsy mahay mampiasa ny haikanto (design) amin'ny sehatra tahaka itony mihitsy ny Malagasy fa avelany ho an'ny hafa ihany ny mikolokolo izany. Soa ihany fa nisy an'i "dada" nitondra ny firenena ka nahavitana "tahirim-bakoka" tahaka izao sady mbola tsy nopotehin'ny sasany na tsy tapaka antenantenany ny fanamboarana azy. (eny, tena manao izay hamparary fo mihitsy aho!)
Izay no ela fa tany ambony rihana no nandehanana hanontany ny vaovao. Ny varavarana nisokatra no nodondoniko, sady hitako niteronterona ihany ilay boky. Lasa ny resaka, mila manao komandy avokoa hay ny olona fa, araka ny resak'ilay ramatoa, tsy misy avoaka eny amin'ny fivarotam-boky izany. Aloa mialoha ihany koa ny vola fa amin'ny 25 jona amin'ny telo ora folakandro no ivoahany na hakana azy eny an-toerana. Nojerikereko ny tao anatin'ny boky ka tsy tiako ny nanaovan-dry zareo ny endri-tsoratra (police de caractere). Mbola toy ny endri-tsoratra taloha ireny ihany, tahaka ny endri-tsoratry ny rakibolana frantsay malagasy nosoratan'i François Rakotonaivo (Ambozontany) ihany amin'ny faritra rakibolana fa mba mahafinaritra kosa ny mijery ny endri-tsoratra amin'ny faritra rakipahalalana. Marihina ho antsika mety ho tsy mahazo tsara ny teny malagasy fa ny rakibolana no ilazana ny hoe 'dictionnaire' ary ny rakipahalalana kosa no anononana amin'ny teny malagasy ny hoe 'encyclopédie'. Nanafatra ihany aho na dia izany aza, satria fantatra ihany ny tsy dia faharisihan'ny olona hividy boky, indrindra fa ny tsy mifandraika amin'ny rafi-pampianarana ankehitriny izay miompana amin'ny teny frantsay, ary ahiana ny tsy ivoahan'ny teny hoe 'natonta fanindroany' intsony. Koa araraoty ry zareo sao dia tsara ihany ny manafatra fa tsy hiandry izay ivoahany eny amin'ny fivarotam-boky.
Rehefa vita moa ny rosia nandoavana ny vola dia saiky hanontany ny adiresy an-tserasera aho saingy ny prôselitisma nataon'ilay madama mandòka ny fanjakan'Andrimanitra araka ny fijerin'ny Vavolombelon'i Jehovah no lasa aloha ka dia naleoko tsy nanohy ny resaka intsony. Amin'ny manaraka indray angamba aho manontany raha mety hisy indray ny fandalovako any amin'ity toerana ity. Amin'ny manaraka indray aho manoratra!
ps: oadray saika adinoko! Inona koa no tombotsoa azo amin'ny tsaho hoe nandalo teto Madagasikara Ravalomanana tamin'ny 23 sy 24 mey e?
jentilisa, sabotsy 6 jona 2009 amin'ny 1:11 maraina